FIFA VIRUS: Waa Sidee Xaalada Dhaawacyadii Valverde Madax Xanuunka Ku Sii Riday Ee Nelson Semedo & Samuel Umtiti? - Gool24.Net
FIFA VIRUS: Waa Sidee Xaalada Dhaawacyadii Valverde Madax Xanuunka Ku Sii Riday Ee Nelson Semedo & Samuel Umtiti?
Xaalada kooxda Barcelona ayaa sii xumaatay kadib markii ay dhaawacyo soo gaadheen difaacyada Nelson Semedo iyo Samuel Umtiti intii lagu jiray fasaxa caalamiga ah. Barcelona waxay markii horeba ku dhex jirtay mashaqo dhaawacyo ah.
Nelson Semedo ayaa laga dhex qaaday kulankii uu xulkiisa Portugal ku matay isreeb reebka Euro2020 halka Samuel Umtiti laga saaray liiska xulka qarankiisa France.
Walwalka ugu badan ee uu Valverde dareemayay waxa uu ahaa dhaawicii soo gaadhay Nelson Semedo maadaama oo uu ahaa difaaca midig ee uu xili ciyaareedkan sida wayn ugu soo xisaabtamayay.
Daqiiqadii 65 aad ee kulankii Portugal iyo Serbia ayaa Nelson Semedo garoonka laga dhex qaaday laakiin war ku dhaw xidhiidhka kubbada cagta Portugal ayaa sheegay in xaaladu ayna u xumayn sidii markii hore la moodayay.
Wararka ayaa sheegaya in dhaawaca Nelson Semedo uu yahay mid aad uga sahlan sidii markii ugu horaysay laga filayay, waxayna taasi war fiican u tahay Valverde oo wadnaha farta ku hayay.
Dhinaca kale Samuel Umtiti ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Barcelona waxaana loo sameeyay daawayn kadib markii uu awoodi waayay in uu xulkiisa France ku matalo kulamada caalamiga ah.
Dhaawacyada Nelson Semedo iyo Samuel Umtiti ayaa ku biiray Lionel Messi, Luis Suarez iyo Ousmane Dembele oo dhamaantood Barcelona dhaawacyo kaga maqnaa.
Haddii uu Nelson Semedo muddo garoomada ka maqnaado waxaa la filayaa in Valverde uu booska difaaca midig ku soo celin doono Sergi Roberto oo uu xili ciyaareedkan khadka dhexe u adeegsanayay.
Laakiin dhaawaca Umtiti ayaan saamayn ku yeelanayn shaxda Barca iyada oo Pique iyo Lenglet ay wali yihiin doorashada kowaad ee difaaca dhexe uu Valverde u soo xusho.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo Umtiti uu ku soo laabtay Barcelona ayaa la filayaa in baadhitaano dheeraad ah xaaladiisa lagu samayn doono halka Nelson Semedo uu isna mari doono baadhitaano kala duwan halka Messi iyo Suarez ay dagaal ugu jiraan in ay kulanka Valencia taam u noqdaan.